Ukuhlola Uchungechunge lukaMathewu 24 - Amaphakethe weBeroean - Ukubuyekezwa kweWebhu.org
Lolu chungechunge luhlola isiprofetho se- “End Times” esitholakala kuMathewu 24, uLuka 21 nakuMark 13. Sichaza okuningi ngezincazelo zamanga eziholele ekutheni amadoda aguqule izimpilo zawo ngenkolelo yokuthi angakwazi ukubona ukufika kukaJesu njengeNkosi enguMesiya. Izihloko ezifana nalokho okubizwa ngokuthi yisibonakaliso okuqukethe izimpi, indlala, izifo eziwumshayabhuqe nokuzamazama komhlaba kusingathwa ngokomBhalo. Kuxoxwa ngencazelo yangempela yosizi olukhulu lukaMathewu 24:21 kanye neSambulo 7:14. Imfundiso yoFakazi BakaJehova yango-1914 iyahlaziywa futhi kuvezwe amaphutha ayo amaningi. Ukuqondwa kwangempela kukaMathewu 24: 23-31 kuyahlaziywa, kanjalo nokusetshenziswa okufanele kokuthi ngubani inceku ethembekileyo neqondayo.